एमसिसी पास नहुने देखेपछि रिसायो अमेरिका, दियो नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी ! – Sandesh Press
September 15, 2021 173
यो आयोजनाका लागि एमसिसीले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने र नेपालले १३ करोड डलर लगानी गर्ने सहमति बनेको छ। सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालका तर्फबाट यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। एमसिसीसँग गरिएको सम्झौता दुई वर्षदेखि संघीय संसद्मा विचाराधीन छ। संघीय संसद्को तल्लो सदनको साधारण बहुमतले सम्झौता अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयमा आउनेछ। सुमारले संसद्ले अनुमोदन नगरेसम्म काम अगाडि नबढाउने बताइसकेकी छन्। (नागरिक दैनिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको)
Prevभुलेर पनि नजोड्नुहोस् यी ५ महिलासँग सम्बन्ध, मिल्नेछ अन्याय र दुख
Nextपति–पत्नीको एउटै राशि छ ? यी राशि हुने दम्पत्तिको हुन्छ गहिरो प्रेम